musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » COVID-19 iri kuuraya yekuAmerica bhizinesi kufamba
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kunyangwe paine kukwira mukufamba kwekuzorora pamusoro pechirimo, ongororo nyowani inojekesa kuona kwakadzikira kwekufamba kwebhizimusi uye zviitiko, zvinoverengera inopfuura hafu yemari yemahotera uye hazvitarisirwa kudzoka kumatanho epamberi pehosha kusvika 2024.
67% yevafambi vebhizinesi vekuUS vari kuronga kutora nzendo shoma.
52% yevafambi vebhizinesi vekuUS vangangodzima zviripo zvekufamba vasina kugadzirisa marongero.
60% yevafambi vebhizinesi vekuUS vari kuronga kumbomisa hurongwa huripo hwekufamba.
Vafambi vebhizimusi vekuUS vari kuwedzera mapurogiramu ekufamba pakati pekukwira kweCOVID-19 kesi, ne67% vachironga kutora nzendo shoma, 52% vangangodzima zvirongwa zvekufamba zviripo pasina kudzokerazve, uye 60% vachironga kudzosera zvirongwa zvekufamba zviripo, sekureva kwenyika nyowani Ongororo yakaitwa pachinzvimbo cheAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA).
Kunyangwe paine kukwira mukufamba kwekuzorora pamusoro pezhizha, ongororo nyowani inosimbisa iwo matarisiro mashoma kufamba bhizinesi uye zviitiko, zvinoverengera inopfuura hafu yemari yemahotera uye hazvitarisirwe kudzoka kumatanho epamuviri kusvika muna 2024.
Kushaikwa kwe kufamba bhizinesi uye zviitiko zvine mhedzisiro huru yekushandira zvese zvakananga pane zvivakwa zvehotera, uye munharaunda yakafara. Mahotera anotarisirwa kupera muna 2021 kudzika mabasa angangoita mazana mashanu ezviuru kana zvichienzaniswa ne500,000. Kune vanhu gumi vese vanoshanda pahotera, mahotera anotsigira mamwe mabasa makumi maviri nematanhatu munharaunda, kubva kumaresitorendi nekutengesa kumakambani anopa hotera - zvichireva kuti anowedzera anenge miriyoni imwe chete. mabasa anotsigirwa nehotera ariwo panjodzi.
Ongororo yevakuru mazana maviri nemakumi maviri yakaitwa Nyamavhuvhu 2,200-11, 12. Pakati peizvi, vanhu makumi mana nevana, kana makumi masere kubva muzana yevakabvunzwa, vafambi vebhizimusi - kureva kuti, avo vanoshanda mune rimwe basa rinosanganisira kufamba zvine chekuita nebasa kana vanotarisira. kufamba bhizinesi kanokwana kamwe pakati pezvino kusvika pakupera kwegore. Zviwanikwa zvakakosha pakati pevashanyi vebhizinesi zvinosanganisira zvinotevera:
67% vanogona kutora nzendo shoma, nepo 68% vangangotora nzendo pfupi
52% vanoti vanogona kukanzura zvirongwa zvekufamba zviripo vasina hurongwa hwekugadzirisazve
60% vangangodaro vachidzosera zvirongwa zvekufamba zviripo kusvika musi unotevera
66% vangangoenda kunzvimbo dzavanogona kutyaira kuenda